Hevitra Template an'ny Akanjo Roblox (2020) - Mamorona ny akanjonao manokana - Lalao
Hevitra Template an'ny Akanjo Roblox (2020) - Mamorona ny akanjonao manokana
Roblox dia sehatra an-tserasera izay mampiaraka ny mpilalao manerantany. Ny mpilalao dia afaka milalao lalao 3D mifandraika ary koa mamorona ny lalao. Miaraka amin'ny famelana ny mpampiasa hamorona fahafinaretana, singa malaza iray ny akanjo Roblox. Ny famoronana fitafiana ao amin'ny Roblox dia fomba iray lehibe hidirana amin'ny famoronana sasany ary hanehoana ny lafiny kanto amin'ny dobo filomanosana goavambe.
Ankoatr'izay, ny famoronana akanjo milay dia manampy ny mpilalao hahita fitaovana sy rindrambaiko tokana azon'izy ireo ampiasaina amin'ny tanjona ankoatra an'i Roblox's. Ho hitan'ny rehetra ny fitafianao mamorona. Azonao atao ny misafidy ny varotra azy ireo amin'ny mpilalao hafa koa.
Inona ny maodely Roblox Shirt?
Roblox dia manome fomba mahafinaritra hanamboarana ireo avatar amin'ny mombamomba ny mpampiasa miaraka amin'ny modely T-Shirt, lobaka ary pataloha. Ny fitafianao avatar tanteraka namboarina dia fomba famoronana iray hanehoana ny mombamomba anao amin'ity sehatra feno ity. Ankoatr'izay, manampy anao hianatra momba ny teknikan'ny sary 3D sy sarimiaina izy ireo.
Tokony ho mpikambana ao amin'ny Builders Club ao amin'ny Roblox ianao hamoronana modely ho an'ny lobanao sy pataloha. Aza matahotra anefa, azonao atao ny mamolavola ny T-shirt anao amin'ny alàlan'ny modely misy maimaim-poana.
Ity lahatsoratra ity dia manome fomba tsikelikely hanampiana anao mamorona modely lobaka Roblox anao manokana.
Mamela ny FPS Unlockers ve i Roblox?
Hevitra hanamboarana ny lobanao Custom Roblox:
Mety ho sarotra ny mahita aingam-panahy hanaovana ny Akanjo Roblox anao. Amin'ity toro-lalana ity dia hanampy anao amin'ny dingana rehetra izahay. Andao hojerentsika ny sasany amin'ireo hevitra tsara indrindra amin'ny Roblox Shirt. Ireo dia mety hanampy eo am-pamolavolana ny Akanjonao Roblox.
1. Mizahà Pinterest
Pinterest no pejy voalohany amin'ny Internet raha ny momba ny atiny. Manana tranomboky lehibe misy sary izy ireo.Afaka mitady hevitra lobaka Roblox mora foana ianao. Misy karazana taonina ho an'ny T-shirt. Ireo dia mahasoa ho an'ireo mpampiasa izay manomboka amin'ny famolavolana.
Tsotra ny famoronana votoaty Roblox, fa ny hevitra no zava-dehibe. Mpampiasa an-taonina maro eo amin'ny sehatra no mizara ny heviny. Mety ho an'ireo mpampiasa mankafy mijery avatar izy io.
Ny afovoan'ny akanjo dia ny faritra afovoany. Ny hevitra famolavolana lehibe rehetra dia mety amin'ity faritra ity. Ireo mpampiasa dia afaka manampy lafiny hafa amin'ity fizotrany ity.
Manoro hevitra anao izahay hiasa voalohany amin'ny ivon'ny . Mahasoa izany ho an'izay manana hevitra ao an-tsaina. Hiseho izany rehefa asehonao amin'ny Internet ny toetranao.
3. Mitadiava karazana
Misy karazana karazany ho an'ny lobaka hita eny amin'ny lampihazo. Azonao atao ny mahita ny karazana lobaka amam-panahy amin'ny alàlan'ny fitadiavana ny karazany. Ireo lalao koa dia mitana anjara toerana lehibe amin'ity singa ity.
Raha te hanana toetra mahafinaritra sy mangatsiatsiaka ianao dia tsara ny torapasika sy ny hevitry ny lobaka hafa — ireo mpampiasa izay maniry hanana lalao dia toa mahasoa amin'ny zavatra niainany. Ny lalao battle royale sy ny ady dia mahafinaritra amin'ny alàlan'ny lobaka camo.
Ahoana ny fomba hanaovana ny maodely Roblox Shirt?
Roblox Shirt Templates dia fomba tsara indrindra hanamboarana ny TShirts anao. Izy io dia ahafahanao manampy amin'ny fiaraha-monina. ny Vola Roblox mandroso miaraka amin'ny fahitana tsy manam-paharoa isan'andro. Ireo mpampiasa dia afaka manamboatra endrika tsy manam-paharoa hanampiana ny lisitra ao aminy. Amin'ity fizarana ity dia hodinihinay ny fomba ahafahanao mamorona T-Shirt Mahagaga amin'ny lalao.
Azonao atao ny misintona ireo môdely azo alaina ao amin'ny rafitranao. Avy eo, amboary sy ampanjifaina izy ireo amin'ny alàlan'ny rindrambaiko sary toa ny Adobe Photoshop, MS Paint, na GIMP.
Ny akanjo maimaimpoana sy tsotra indrindra dia T-shirt apetraka eo alohan'ny avatar. Na dia voafetra aza ny endrik'izy ireo, dia mbola azonao atao ny mampiseho ny fahaizanao mamorona. Ny modely lobaka sy pataloha dia mihorona manodidina ny vatan'ny avatar iray manontolo, izay vao mainka nitaona ny mombamomba anao.
Mandritra ny famolavolana dia mila mitandrina manokana mba hanitsiana ny ampahany amin'ny modely (Havia, Havanana, Havao ary Ambany). Ary koa, ny avatar sasany toy ny 'Circuit Breakers' dia tsy mamela ny akanjo amin'ny famolavolana.
Tsy mahomby ho an'ny lobaka sy pataloha ny fampidirana ny modely raha tsy marina ny refy ampidirina.
Manao T-shirt -
Ny tranomboky Roblox dia manome modely T-shirt handrafetana ny avatar anao maimaim-poana. Raha ny tokony ho izy, ny sary 128 * 128 teboka dia mety indrindra amin'ny fampiharana eo alohan'ny avatar.
Ireto ny dingana tsy maintsy arahinao mba hamoronana endrika T-shirt tena tsara ho an'ny mombamomba anao.
Mandehana amin'ny pejy 'Roblox T-shirt template'.
Tehirizo amin'ny PC ny modely.
Sokafy sy ahodino ny modely amin'ny alàlan'ny rindrambaiko mpanonta sary. Azonao atao ny mampiasa fitaovana misy malalaka na rindrambaiko premium araky ny filanao. Lightroom, Photoshop, ary GIMP 2 no sasany amin'ireo safidy azonao andramana.
Ampiasao ny fahaizanao mamorona sary sy fanovana hanatsarana ny modely. Azonao atao ny manampy sary famantarana na manampy anarana mampihomehy amin'ny avatar anao. Azonao atao ihany koa ny mandray fanampiana avy amin'ny fampianarana an-tsary maro hanamboarana avatar mahasarika ny mombamomba anao.
Araho ny haben'ny modely. Ny ampahany aloha sy aoriana amin'ny avatar dia mila 128 * 128 teboka. Ny faritra havia sy havanana dia mila manodidina ny 64 * 128 teboka.
Ny tapany ambony sy ambany amin'ny vatanao dia tokony ho 128 * 64 teboka eo ho eo. Ny kianja kely 64 * 64 teboka dia ampahany amin'ny tapany ambony sy ambany amin'ny sandry na tongotra.
Tehirizo ny volavolanao, ary vonona ny hampakatra ianao.
Mampakatra ny endrika -
Ny môdely rehetra dia tsy maintsy mandalo ny hevitry ny mpanelanelana alohan'ny hamaranana azy.
Mizotra mankany amin'ny tranokalan'i Roblox mamorona Pejy . Misafidiana safidy amin'ny T-shirt, pataloha na lobaka. Mila misoratra anarana amin'ny fandoavana ny lobaka na pataloha ianao.
Tsindrio ny bokotra 'safidio ny rakitra' ary ampidiro ny endrikao. Omeo ny avatar nakarinao ny anaranao.
Raha vantany vao ankatoavin'ny mpanelanelana ny famolavolana dia haseho amin'ny zavatra noforoninao izany. Azonao atao ny mampiasa an'io avatar na mivarotra izany amin'ny vondron'olona mpilalao Roblox.
Olana iraisana vitsivitsy:
Tsy afaka mampakatra ny môdely sary:Hamarino tsara fa ny mari-pahaizana momba ny habe dia marina ary voatonona tsara.
Fotoana fankatoavana:Tsy mila adiny iray na roa ny fankatoavana modely ataon'ny mpanelanelana. Hamarino tsara fa endrika sary mety toy ny jpeg, png, ary BMP io.
Afaka mivarotra akanjo ve ianao raha tsy mambra?- Tsia, mila mpikambana ao amin'ny Builders Club ianao hivarotra na hanolotra avatar.
Roblox dia mamela ny fametrahana ny anarana sy ny famaritana ny môdely mba hizaha ny olona. Azonao atao ny mamaritra ny vidiny ary manao doka ny fitafianao Roblox, izay mihazakazaka 24 ora alohan'ny hanjavonany.
Manantena aho fa ity fampianarana ity dia nanome fanazavana amin'ny an-tsipiriany mba hamoronana T-shirt natokana ho anao maimaimpoana ao amin'ny tranokala Roblox. Ny akanjo roblox dia fomba iray tsara hanaovana avatar tokana ho an'ny kaontinao sy hahazo laza eo amin'ireo mpikambana ao amin'ny fiarahamonina.
Roblox dia azo antoka fa mahafinaritra amin'ny lalao mahatalanjona maro, traikefa filalaovana 3D, ary fifandraisana ara-tsosialy izay ahafahan'ny mpampiasa mampiseho ny fironany miafina miafina.
Roblox amin'ny Chromebook - Azo atao ve?
iPhone 11 Pro Model Isa (A2160, A2215, A2217)
maimaim-poana fiambenana an-tserasera ny sarimihetsika tsy misy sonia
saram-pianarana ho an'ny mpianatra praiminisitra amazon
kambana mahita chat mandritra ny streaming
tranokala fihainoana mozika
tranonkala streaming maimaim-poana tsara indrindra 2017
fomba fampidinana optifine tsy misy Java
pokemon midina 16 jolay